Snapdragon 865 Plus မသုံးထားတဲ့ Red Magic 5S မှာ ဘယ်အချက်တွေက အားသာသွားမလဲ? — Anycall Mobile
Snapdragon 865 Plus မသုံးထားတဲ့ Red Magic 5S မှာ ဘယ်အချက်တွေက အားသာသွားမလဲ?
By liam July 29, 20203Mins Read
Nubia ကတော့ အသစ်ထွက်နေတဲ့ Gaming ဖုန်းတွေကြားမှာ နောက်ကျမကျန်ခဲ့ဖို့ Red Magic 5S ဖုန်းအသစ်ကို အခုပဲမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
Red Magic 5S မှာဆိုရင် အလန်းစား Features အသစ်တွေပါဝင်လာခဲ့ပေမယ့်လည်း ROG Phone3နဲ့ Lenovo Legion ဖုန်းတို့မှာ သုံးထားတဲ့ Snapdragon 865 Plus Chipset ကိုတော့ သုံးထားခြင်းမရှိပါဘူး။
Snapdragon 865 Plus Chipset အစား Features အသစ်တွေကို ထည့်ပေးထားတဲ့ Red Magic 5S မှာ ဘာတွေထူးခြားလာမလဲဆိုတော့ …
ပိုကောင်းလာတဲ့ Cooling System နဲ့ GPU Boost
သိသိသာသာထူးခြားလာတာကိုပြပါဆိုရင် Silver Plated Heat Sink Sheet နဲ့ Nanosilver Glass Back တို့ပါဝင်ထားတဲ့ Cooling System ကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြရတော့မှာပါပဲ။
Silver-Plated Heat Sink Sheet နဲ့ Nanosilver Glass Back တို့ရဲ့ အားသာချက်ဟာ Heavy တွေသုံးတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခြား Copper Back ကိုသုံးထားတဲ့ ဖုန်းတွေထက်ပိုပြီး အပူချိန်တတ်မလာအောင် ထိန်းထားနိုင်တာပါ။
Nubia ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဖုန်းထဲကို လေအေးဝင်နိုင်တဲ့ နှုန်းဟာ အရင်ကထက် 56% အထိပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်သိသိသာသာပြောင်းလဲလာတဲ့ Feature ကတော့ GPU Boost ပါပဲ။ ဒီ Feature ကတော့ Nubia ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်ပြီး Games တွေဆော့ရာမှာ ထစ်တာတွေဘာတွေမရှိဘဲ ပို Smooth ဖြစ်စေအောင်စွမ်းဆောင်ပေးမယ့် Feature လည်းဖြစ်ပါတယ်။
GPU Boost ကိုအသုံးပြုဖို့ဆို Cooling Fan Accessory အသစ်တစ်ခုလိုအပ်မယ်လို့ Nubia ကပြောပါတယ်။
Cooling Fan ရဲ့နာမည်ကတော့ Ice Wind Cooling Box ဖြစ်ပြီး အအေးဓာတ်ကို 56% အထိပေးနိုင်မယ်လို့ Nubia အဆိုအရသိရပြီး အပူချိန်မှာလည်း 25°C အထိကျသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Fan ရဲ့ အမြန်နှုန်းက 15,000 RP အထိရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် Fan မှာ နာကြပ်ပေါက်ကောပါဝင်ထားပြီး 30W PD Fast Charging ကိုပါထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
အပေါ်ကအချက်တွေကတော့ Red Magic 5S မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Features အသစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Red Magic 5S ရဲ့ Specs တွေကကောဘယ်လိုရှိမလဲ??
Red Magic 5S မှာ 6.65-inch FHD+ AMOLED Display ကိုသုံးပေးထားပြီး 144Hz Refresh Rate ၊ 240Hz Touch Sampling Rate တို့နဲ့ အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ Performance အတွက် Snapdragon 865 Processor ကို 8GB, 12GB, or 16GB LPDDR5 RAM ၊ 128GB or 256GB UFS 3.1 Storage တို့နဲ့တွဲသုံးပေးထားပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာ 64MP Sony IMX686 sensor + 8MP Ultra Wide Camera ၊ 2MP Macro Camera တို့ပါဝင်တဲ့ Triple Cameras ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Cameras Features တွေအနေနဲ့ OIS, PDAF, andaSuper Night Scene စတဲ့ Features တွေပါလာပါတယ်။ Selfie camera အတွက်တော့ 8MP Sensor ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။
Software ပိုင်းမှာတော့ Android 10 အပေါအခြေခံထားတဲ့ Red Magic OS ကို Run ပေးထားပါတယ်။
Battery အတွက် 55W (10A) fast charging ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ 4500mAh battery လည်းပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခြား Features တွေအနေနဲ့ DTS X Ultra audio ၊ Audio jack ၊ Capacitive Trigger buttons ၊ Wi-Fi6၊ In-display Fingerprint scanner နဲ့ Dual-frequency GPS တို့ပါဝင်လာပါတယ်။
Red Magic 5S 8GB RAM + 128GB version – ¥3799 (~$543) (မြန်မာငွေ7သိန်းခွဲဝန်းကျင်)
Red Magic 5S 12GB RAM + 256GB version – ¥4399 (~$628) (မြန်မာငွေ 8 သိန်းခွဲဝန်းကျင်) နဲ့
Red Magic 5S 16GB RAM + 256GB version ¥4999 (~$714) (မြန်မာငွေ9သိန်း 8 သောင်းကျော်) ကျသင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်အနေနဲ့ Cyber Neon နဲ့ Ice Wind Silver ဆိုပြီး အရောင်နှစ်ရောင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရမှာပါ။
ဖုန်းကို စတင်ရောင်းချမယ့်ရက်က August ၁ ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး Nubia ရဲ့ Online ၊ Offline Store တွေမှာဝယ်ယူလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Snapdragon 865 Plus သုံးထားတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေအကြား Red Magic 5S အဖို့ ခေါင်ထောင်လာနိုင်လေမလား.?
Feature အသစ်တွေကြောင့် သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေထက်ပိုသာသွားမလား? မွေးခွန်းတွေကြား ဒွိဟဖြစ်ရင်း ပရိတ်သတ်ကြီး Comment မှာပေးတဲ့အဖြနဲ့ပဲ အတည်ပြုပါရစေတော့နော် …